Hindise ka soo baxay qabashada xeerka Dublin ee caruurta qaxootiga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hindise ka soo baxay qabashada xeerka Dublin ee caruurta qaxootiga ah
La daabacay onsdag 27 februari 2013 kl 14.11
Caruurta aan la wehlin ee qaxootiga ah ee khatarta ugu jira in dib loogu celiyo xaaladaha xun sida tusaale ahaan mida dalka talayaaniga, ayaa hadda suuragal waxay tahay in dacwadahooda magan-gelyo doonka in lagu eego halka ay ka dalbadaan ee aan la eegin meesha ay ka soo galeyn qaaradda yurub, sida ay baahisay idaacadda wararka ee Ekot.
Hindisaha ah in caruurta aan la helin ee qaxootiga in uusan qaban xeerka Dublin ayaa waxaa soo jeediyay qareenka guud ee maxkamada Yurub.
Xeerka Dublin ayaa qoraya in kiisaska dalbashada magan gelyada keliya uu eegi karo dalka ugu horreeyay ee soogalootiga ka soo caga dhigtaan qaaradda Yurub.
Dacwada hadda soo jeedisay isbedelkan ee maxkamada Yurub ayaa ku saabsan saddex dhallinyaro ah oo joogta dalka Ingiriiska, kuwaasi oo sida uu qorayo xeerka Dublin ay tahay in lagu celiyo dalka talayaaniga oo ah meesha ay ka soo caga dhigteen qaaradda Yurub.
Hase yeeshee waxaa arrintaasi diidan qareenka guud ee maxkamada Yurub iyada oo imminka laga dhowrayo maxkamada Yurunb in ay iyana qaadan doonto go'aanka qareenka.
Sanadkii aynu soo dhaafnay kiisas gaaraya 3000 oo ah caruurta aan la wehlin ee magan galyo doonka ah ayaa go'aano laga soo gaaray, 328 ka mid ahaa ayaa waxaa qabtay xeerka Dublin iyada oo codsiyadooda aan lagu eegin Iswiidhan dhexdeeda.